Telefishanka Aljazeera Oo Baahiyay Warbixin ka Dhan Ah Somaliland + [ Muuqaal ] | Haldoor News
Telefishanka Aljazeera Oo Baahiyay Warbixin ka Dhan Ah Somaliland + [ Muuqaal ]
Hargeysa(Haldoornews):-Telefishanka laga leeyahay dalka Qadar ee Aljazeera qaybtiisa Carabiga ayaa laga sii daayay warbixin ka dhan ah xidhiidhka Somaliland iyo dawladda Isu Tagga Imaaraadka Carabta.
Madaxweyne xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Saylici ayaa Arbacadii kaga qayb galay Berbera dhagax dhigga balaadhinta dekedda Berbera oo ay bilaabayso shirkadda reer Imaaraad ee DP World waxaanu warkani u muuqday mid lagu soo beegay bilawga mashruucan.
Warbixinta ayaa dawladda Imaaraadka ku eedeysay in ay Soomaaliya gayso hub, islamarkaana soo xigatay warbixin ay sheegtay in ay soo saareen kooxda Qaramada Midoobay ee kormeerta cunaqabataynta Hubka Somalia iyo Ereteriya saaran. Warbixinta ay soo xigteen ayaa sheegaysa in Imaaraadku saldhig Militari oo sharciga khilaafsan ka dhisanayo Berbera.
Telefishanka Aljazeera oo ku hadla afka dawladda Qadar ayaa u muuqda mid Somaliland dacaayado ka fidiya tan iyo markii Somaliland la safatay xulufada Sucuudiga ee xidhiidhka u jaray Qadar.
Xurgufta siyaasadeed ee Qadar iyo Somaliland ayaa u muuqata mid ay si toos ah loogu adeegsado telefishanka Aljazeera. Qadar ayaa xidhiidh fiican la leh Soomaaliya halka Somaliland xidhiidh fiican la leedahay Imaaraadka, sidoo kalena dhawaan uu muuqda waji cusub oo Sucuudiga iyo Somaliland xidhiidhkoodu yeelanayo